အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ထိ ကဲနိုင်ဖို့ တစ်ဦးတည်းသောအချစ်ဆုံးမောင်လေးဆီက မွေးနေ့ဆုတောင်းရရှိခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျေ - Myannewsmedia
သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ လှတျလပျသူတဈယောကျပီပီ သူမကိုယျသူမလညျး ဘာကိုမှ ထိနျးခြုပျထားခွငျးမရှိပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနတေတျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ မိသားစုကလညျး သငျဇာဝငျ့ကြျောအပျေါ နားလညျမှုအပွညျ့ပေးထားပွီး သငျဇာတဈယောကျ စိတျခမျြးသာစဖေို့ကိုသာ ဖွညျ့စညျးပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကလညျး အသကျသုံးဆယျကြျောအရှယျအထိ အိမျထောငျမပွုသေးပဲ တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးအဖွဈ မိသားစုနဲ့အတူတူ နထေိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဒီဇငျဘာလ (၄) ရကျနကေ့တော့ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ အသကျ (၃၃) နှဈပွညျ့ မှေးနလေ့ေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ သူမရဲ့ မှေးနမှေ့ာ မိသားစု၊ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှနေဲ့ အဈမဖွဈသူ အေးခဈြခဈြကြျောဆီက အမှတျတရ မှေးနဆေု့တောငျးတှရေရှိခဲ့ပွီး မောငျအငယျဆုံးလေး ညီဆကျကြျောဆီက “Happy birthday my sister. ဖှားကွီးဖွဈတဲ့ထိကဲနိုငျပါစဗြော။ 🥳😬🤣” ဆိုပွီး မှေးနဆေု့မှနျကောငျးရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ မောငျလေးကတော့ မငျးသားတဈယောကျလို ခြောမောတဲ့ ရုပျရညျမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားခွငျးခံရသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျဇာကလညျး သူမရဲ့ မိသားစုနဲ့တကှ မောငျလေးညီဆကျကြျောနဲ့ သူ့ရဲ့သားလေးရဲ့ ပုံရိပျကို မကွာခဏခပြွတတျတာမို့ ပရိသတျတှနေဲ့ မစိမျးလောကျဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ သငျဇာတဈယောကျ မောငျလေး ညီဆကျကြျော တောငျးတဲ့ဆုတှနေဲ့ တဈလုံးတဈဝကွီးပွညျ့စုံပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Source: Nyi Sat Kyaw’s fb
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ လွတ်လပ်သူတစ်ယောက်ပီပီ သူမကိုယ်သူမလည်း ဘာကိုမှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ မိသားစုကလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်အပေါ် နားလည်မှုအပြည့်ပေးထားပြီး သင်ဇာတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ကိုသာ ဖြည့်စည်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကလည်း အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ်အထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် မိသားစုနဲ့အတူတူ နေထိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အသက် (၃၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အစ်မဖြစ်သူ အေးချစ်ချစ်ကျော်ဆီက အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေရရှိခဲ့ပြီး မောင်အငယ်ဆုံးလေး ညီဆက်ကျော်ဆီက “Happy birthday my sister. ဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ထိကဲနိုင်ပါစေဗျာ။ 🥳😬🤣” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ မောင်လေးကတော့ မင်းသားတစ်ယောက်လို ချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာကလည်း သူမရဲ့ မိသားစုနဲ့တကွ မောင်လေးညီဆက်ကျော်နဲ့ သူ့ရဲ့သားလေးရဲ့ ပုံရိပ်ကို မကြာခဏချပြတတ်တာမို့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သင်ဇာတစ်ယောက် မောင်လေး ညီဆက်ကျော် တောင်းတဲ့ဆုတွေနဲ့ တစ်လုံးတစ်ဝကြီးပြည့်စုံပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous post ကလေးမေမေတစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာ ဘုရားဝတ်ပြုတာတောင် သေချာအာရုံမစိုက်နိုင်ကြောင်း ပြသလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Next post ” Examplezအဖွဲ့ရဲ့ နှစ်(၂၀)ပြည့်Showပွဲကို အားပေးဝန်းရံဖို့အတွက် စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ နေတိုး”